February 19, 2020 NEWS 4
HARGEYSA(P-TIMES) – Warsidaha PuntlandTimes wuxuu helay maclumaad cadeynaya in ay Somaliland qorsheynayso asbuucyada nagu soo wajahan in ay ciidamadeedu u dhaqaajiso dhawr goobood oo muhiim ah si ay u gaarto, waana qeyb kamid ah qorshe ay horey u dajiyeen dawladda Itoobiya & Somaliland oo doonaya in lasoo xiro xaduudaha ay sheegato Somaliland.
Warsidaha ayaa ogaaday in shir horey uga dhacay dalka Itoobiya, gaar ahaana magaalada Dirir-dhaba oo dhexmaray Somaliland iyo Itoobiya laysku raacay meelmarinta qorshahan oo qeyb ka ah sugida Amniga dalka Itoobiya, taasna ay ahayd soo jeedin ku timi mid la doonayo in lagu xaqiijiyo.
Wasiiro katirsan Xukuumadda Puntland oo tagay magaalada Wardheer ayaa horey ay Itoobiya ugu wargalisay qorshahan oo ay ugu horeyso magaalada Buuhoodle ee xarunta gobalka Cayn, taas oo qorshuhu yahay in si nabadgalyo ah loo gaarsiiyo nidaamka Somaliland.
waa sheeka aan soconeyn, xuduuda gumeysi dhigay ma jirin, ingiriis in uu gumeysto woqooyi kama qorneyn qaramada madoobey, waayo markii ay rabeen in ay koofur raacaan waa loo diidey, waxa la yiri dalab soo qorta, ilaa dalab ay qorteen lama ogolaan, ingiriis wuxuu meesha u tegey dhinaca itobiya in uu xuduud ka sameeyo, ee uu gooyo Ugadenya. midaargagixisada, shabaab woqooyi baa laga asaasey, waxa ay fadhiyaan Burca, isaaq baa wada, hadaba malaga dhegeysanayaa Buuhoodley ka yimaadaan. waa dagaal bilaabanaya.
Maamulka goboleedka hargeysa awooda xakuu ka keena uu dhul uusan laheyn ku qabsan karo. Waxaan ogeyn wixii ka dhacey ceyn buuhoodle iyo kalshaale.
Dowladii Engiriiska ayey u suurta galilaheys.oo aheyd a wood, caalami ah. Macaada waa Ethiopia oromo cafar xabshi tigrey iyo qoomiyado kale oo xaarka cunaya. Macquul maaha in dad Soomaliyeed uu gumaado Soomaliyeed kale oo qabiil ah. Waxey noqoneysaa qabiil inuu qabiil kale dhulkiisa u soo guuro. Oromo ma aqbaleyso ineyxabashi dhuljeeda ka qaadato waa saas sheekadu. Beesha isaaq waa ee hargeysa iyo burco iyagaa ka guurya deeganadòd iyagaana isku dili sidi cel afweyn oo kale.
SNM (Aka Somaliland) Daacish, Al-Shabaab are same and they are treat to the peace of the horn…Oroma must understand these factions are the enemy of the peace in the horn…
Guleid Abdulkadir says:
Somaliland ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan waa ka horraysaa Puntland. Xal kale ma jiro boowe oo aan ka ahayn inaan isha ka fiirsano ama jihaad aan galno aanba ku dhammaanee.